Eyona ndawo ilandelayo yokuKhangelwa kweGPS kwizigulana ze Dementia | I-Singapore ephezulu ye-GPS ye-GPS Tracker ye-Autism / ye-Autistic yabantwana kunye neDementia yabantu abadala
Izifo ezinjengesifo sengqondo esixhalabisayo zinokucima inkumbulo yomntu kunye neendawo eziqheleneyo ziye zingaqheleki, oko kwenza ukuba kube nzima kubo ukuziqhelanisa neemeko ezintsha. Ukudideka kwesi sifo kukhokelela ekuzuleni, yinto eqhelekileyo nexhalabisayo yabantu abakhathalela abo babathandayo kwaye bakhathazeke ngesigulana esichaphazelekayo ukuba boyike kwaye baphulukane neemeko ezahlukeneyo.
Kukho izisombululo ezimbalwa kakhulu zokujongana nokuzulazula kunye nokuqinisekisa ukuba izithandwa zakho zikhuselekile kwaye zikhuselekile. Ukulandelelwa kwe-GPS ngoku kusetyenziswa ngokubanzi njengesisombululo kumatyala anje kwaye ukusetyenziswa kwawo kubanzi. Ezi zixhobo zikuvumela ukuba ufumane umntu ochaphazelekayo kwaye uncede umfumane ngokulula.
Kutheni i-GPS Trackers ibalulekile kwizigulana ze Dementia:
Kwinxalenye enkulu yesigidi yabantu base-UK abanesifo sengqondo esixhalabisayo abahlala kumakhaya abo, ngaphezulu kweepesenti ze-40 baya kulahleka ekugqibeleni, kwaye nge-25,000 baya kulahleka ngokuphindaphindiweyo, besandisa umngcipheko wabo wokwamkelwa kukhathalelo olude. Ngelishwa, i-50% yomntu ngamnye onyamalale ngaphezulu kube kanye ngaphezulu kweeyure ze-24 ikhahlela ibhakethi okanye onzakaliswe ngokwenene.
Ngayiphi na imeko, izazinzulu ziyamkela into yokuba ukuveza izixhobo xa umntu onesifo sengqondo esixhalabisayo enokuxabisa izibonelelo kunye neziphumo zokudlulisela igajethi, kwaye ngexesha elinokubangela ukuba bakhawuleziswe ekusebenziseni igajethi ukuze iguqukele ekubeni ngumlinganiso, ingabusindisa ubomi .
Uviwo, oluboniswa kwingxelo kwiAlzheimer's Society, lwaluthwala abantu abanesifo sengqondo esixhalabisayo, iintsapho zabo kunye nabanonopheli kunye ne-cops, iziseko, kunye nososayensi, ukuvavanya isidingo kunye neziphumo ze-GPS trackers zinokuba nazo kubomi bomntu ngamnye.
Inxalenye yoviwo ibandakanya ukuncokola nabantu abanesifo sengqondo esixhalabisayo ngelixa bebehambahamba kunxibelelwano besebenzisa indawo yabo yokufumanisa izinto, njengokuqhubeka kweentlanganiso kunye nabakhathaleli bosapho.
Ugqirha Ruth Bartlett, weDyunivesithi yaseSouthampton, wenza uphando wathi: “Ngokwandisa inani labantu abanesifo sengqondo esixhalabisayo abahlala ekhaya kunye nokwandisa ukwamkelwa nokusetyenziswa kwezixhobo eziphambili, ukusetyenziswa kwezinto ezintsha zeGPS (phakathi kwabanye) kusenokwenzeka yandisa ngokukhawuleza.
“Sinenketho yokubonisa ukuba abantu ababone ithuba elibonakalayo ekusebenziseni igajethi bekufanele ukuba bayayisebenzisa kwaye baxabisa ukuyisebenzisa. Ngayiphi na imeko, ngokungathandabuzekiyo abantu badinga uncedo olukhethekileyo ekusebenziseni ezo zixhobo kwaye iitoni zedatha zinokuthathwa ekuphumeni ukuhamba nomntu. I-GPS ayikhuselekanga kodwa inokunceda ukufumana umntu ngokukhawuleza kwaye kule migca isindisa ubomi. ”
Ugqr. Bartlett wongeze ukuba ukunika izixhobo kwendawo kubantu abanesifo sengqondo esixhalabisayo kuya kubaxhobisa ukuba babe namathuba abalulekileyo kunye nenkululeko ngakumbi ngelixa bekhuthaza iintsapho zabo kunye nabanonopheli.
"Le nto intsha inokuxhasa iintsapho nabantu bazinzise kukhetho olufundileyo ukunceda ukunciphisa ubungozi oboniswe kubantu abanesifo sengqondo esixhalabisayo, kwaye ngaphezulu koko kuthathela ingqalelo inkululeko ekufuneka ibekiwe ngelixa kunikwa abakhulisi uzinzo lokwenyani.
"Ukongeza koku, sinesithuba esongezelelekileyo sokufumana ithuba lokufumana ngokukhawuleza umntu olahlekileyo onokuba sengozini yokwenene."
Iqela lophando laseSouthampton liyathemba ukuba ingxelo yalo iya kuzisa imiba yokukhanya kwezibonelelo zomntu onesifo sengqondo esixhalabisayo esinokufumana umkhondo kwi-GPS kwaye kukhokelela ekunyuseni kokuthatyathwa ekusebenziseni kwabo abantu kunye neentsapho.
Ukujonga umkhondo weGPS
Kule mihla, i-GPS elandelayo iwotshi yabantu abadala ihamba nezixa ezikhulu. Nazi ezinye zeengenelo zako:
Abagcini banokuthi bayazi indawo yokuhlala yabantwana babo
Unako, ngaphandle kokunatyiswa, uthumele imiyalezo ye-SOS enobunzima kubafowunelwa bakho kwisigaba sesibini
Inokwenza ukuba ukwazi ukulandela inani lamanyathelo owathathileyo
Ezi zixhobo zeglasi zinokulandela ngokuchanekileyo iinkcukacha zethu zokuba sempilweni
Inxalenye yezi zixhobo ngokufanayo zihamba kunye nokuphakanyiswa okuphezulu okufana nokusetyenziswa okusekwe kwi-Intanethi, ikhamera, umnxeba ngelizwi, ukuthelekisa ngocingo, isibhakabhaka ngumda ukusuka apho
Ukufowuna kweVidiyo yeGPS engamanzi yeManzi yabantwana kwi-GPS033W:
Ukuba ukhangele ezinye ezinokuthenjwa isixhobo sangempela sokulandela umkhondo sabantwana bakho, emva koko sicebisa ukuhamba neGPS033W. Esona sisicombululo sokwenyani osifunayo. Oku kunomdla kubantwana kwaye siqinisekile ukuba abantwana bakho bayonwabele ukunxiba ezi smartwatches. Ezi smartwatches zenziwe ngamanyathelo okhuseleko asebenzayo ukwenza ukuba abazali baqiniseke ngokukhuselekileyo abantwana babo kunye nabo babathandayo.
Imveliso iyafumaneka kwintengiso kwaye iza noku kulandelayo Iimbonakalo:
Iselfowuni yefowuni ye-APP okanye iqonga lekhompyuter ye-GPRS, zombini iindlela zokulawula iwotshi.
I-GPS Tracker Pendants:
I-GPS tracker pendants yenzelwe umntwana wakho, umdala, izithuthi, izilwanyana zasekhaya kunye nokunye. Isendlaleli sokulandela umkhondo wabantwana ye-GPS sesona sikhokelo sikhuselekileyo emarikeni. Nazi ezinye zeengenelo zako:
Soloko uyazi izinto ezenziwa ngumntwana wakho
Yiya kwisixhobo sabathandi bezilwanyana zasekhaya
Gcina umntwana wakho ekhuselekile
Ingasetyenziselwa njenge-GPS yokulandela umkhondo wabantu abadala
I-GPS Pendant Tracker (i-Dementia yaBadala naBantwana) GPS014D:
Isixhobo esilula, esine-frills esisingatha iziseko zokwazisa ukuba umntwana wakho uphi. Ungacwangcisa i-geofices kwaye iza ne-SOS alarm nayo. Ukuba ukhangela imveliso efanelekileyo yokulandela umkhondo ngexesha lexesha kwimarike, sicebisa ukusetyenziswa kweGPS014D. Esi sixhobo siza kunye nomkhondo wembali.
Imveliso inezi zinto zilandelayo:
I-GPS + i-LBS + iWIFI + ye-AGPS Yes
Ukulandelwa kwexesha langempela
Ibhetri ephantsi yebhetri
4583 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-9 Namhlanje